आकाशलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा, 'तिमीसँग'ले चम्काउला ?
मनिष अन्जान, काठमाण्डौ, 2017/09/13
नायक आकाश श्रेष्ठ अभिनित फिल्म 'म त तिम्रै हुँ' गएको वर्ष प्रदर्शनमा आएको थियो । नायक अनमोल केसीकी आमा तथा नायिका सुस्मिता केसीले निर्माण गरेको यो फिल्ममाथि आकाशको ठूलो भरोसा थियो तर सिनेमा घरहरुमा फिल्मले पानी पनि भन्न पाएन । आकाशभन्दा अगाडि यो फिल्ममा नायक पल शाह अनुवन्धित भएका थिए तर कथावस्तु चित्त नबुझेपछि उनले काम गरेनन् । पल शाहलाई अफर गरिएको भूमिका पाउँदा आकाशको मन चंगा भएको थियो तर फिल्मले माख्खो मारेन ।
दोस्रो फिल्मको निर्धारण पहिलोले गर्ने हुँदा एउटा कलाकारलाई डेब्यू फिल्म हिट हुन आवश्यक छ । तर, आकाशलाई त पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । छरितो शरीर, गोरो वर्ण, डिम्पल पर्ने हाँसिलो मुहारले आकाशलाई सम्भावना बोकेको नायकको रुपमा हेरिएपनि डेब्यू फिल्मले नै उनलाई चुर्लुम्मै डुबायो । 'म त तिम्रै हुँ' असफल भएपछि अब फिल्मी यात्रा अगाडि बढ्छ वा रोकिन्छ भन्ने दोधारका बिच आकाशले दोस्रो फिल्म साइन गरे 'तिमीसँग' । अहिलेकी सर्वाधिक चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग उनले फिल्ममा रोमान्स गरेका छन् ।
पहिलो फिल्मबाट दर्शकको नजरमा क्लिक हुन नसकेका आकाश दोस्रो फिल्मबाट भने स्टार बन्ने कसरतमा छन् । भाद्र ८ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको भएतापनि भाद्र १६ गते साम्राज्ञी अभिनित फिल्म 'ए मेरो हजुर २' प्रदर्शन हुने भएपछि 'तिमीसँग'को रिलिज डेट पोष्टपोन्ड गरिएको छ । फिल्मको टीजर र दुई गीत भने सार्वजनिक भैसकेको छ । पहिलो फिल्मबाट ढुंगा चपाएका आकाशलाई के 'तिमीसँग'ले चम्काउला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।